Things to do after walking exercise in winter ❄ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆောင်းရာသီမှာ လမ်းလျှောက်ပြီး လုပ်သင့်တဲ့ အချက်…
ဆောင်းရာသီမှာ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ရော ဝိတ်ချဖို့ အတွက်ရောနဲ့ အများစုက လမ်းလျှောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒီလိုလေး ပုံမှန် လမ်းလျှောက်ပေးနိုင်တာကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အထတစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မနက်စောစော လမ်းလျှောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ကတော့….
တစ်နေ့တာ လန်းဆန်းစေဖို့ Energy ရရှိခြင်း
မကောင်းတဲ့ Cholesterol များကို ကျစေခြင်း
သွေးလည်ပတ် စီးဆင်းမှု ကောင်းမွန်စေခြင်း
အဆုတ် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုခြင်း
အရိုးပွခြင်း အဆစ်အမြစ်နာခြင်းမှ ဖြစ်တတ်သော နာကျင်မှု လျော့နည်းစေခြင်း
ဆီးချို နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
နှလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
Body posture ကောင်းမွန်လာခြင်း အပြင် များစွာသော ကောင်းမွန်တဲ့ ကျေးဇူးများကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်တာ ကောင်းကျိုးတွေပဲလား ဆိုးကျိုးရော မရနိုင်ဘူးလား ဆိုရင် ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ လမ်းလျှောက်စ အလေ့အကျင့်မရှိသူတွေအတွက်
ညောင်းညာ ခြင်း ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း အရိုးအဆစ်နာကျင်ခြင်းများ ရနိုင်သလို
အချိန်ကြာမြင့်စွာ လမ်းလျှောက်မိပါကလည်း ခြေထောက်ကြွက်သား နာကျင်ကိုက်ခဲတာကို ခံစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနာကျင်ခြင်းတွေကနေ သက်သာလျော့နည်းပြီး နောက်ရက်တွေ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်နိူင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.
1. မလိုအပ်ဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ လမ်းမလျှောက်ခြင်း
2. ကြွက်သား နာကျင်မှု ပြေလျော့စေရန် Voltex ကဲ့သို့သော ဆေးများပုံမှန်လိမ်းပေးခြင်း
3. Body weight ထိန်းခြင်း
5. Yoga ကဲ့သို အကြောလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်း
6. သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်သော အစားအစာများ စားခြင်း
7. ဆီကြော်များ မစားဘဲ ရှောင်ခြင်း စတဲ့ အချက်တွေ ကို မနက်စောစော လမ်းလျှောက်ပြီးတိုင်းမှာ လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်နေကုန် လန်းဆန်း ပေါ့ပါးစေရုံသာမကဘဲ ကြွက်သား နာကျင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် လမ်း ပုံမှန်လျှောက်ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
👧 Pelvic Inflammatory
💧 Bad things of drinking water while standing